Imaaraatiga oo sheegay inay dib uga noqdeen xiritaanka Telefishinka Aljazeera • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Imaaraatiga oo sheegay inay dib uga noqdeen xiritaanka Telefishinka Aljazeera
Imaaraatiga oo sheegay inay dib uga noqdeen xiritaanka Telefishinka Aljazeera
July 14, 2017 - By: Abdirizak Shiino
Xulafada Sacuudiga iyo Imaaraatiga ee xayiraada kusoo rogay Qatar ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay wadahadal ka galaan 13kii qodob oo ay ku xujeeyeen inay dowlada Qatar dhaqan geliso.
Dowlada Qatar oo diiday 13-kii qodob oo ay ka codsadeen Isbaheysiga Sacuudiga, Imaaraatiga, Masar iyo Baxreyn ayaa waxaa kamid ahaa xiritaanka Telefishinka Aljazeera, in Doxa xiriirka u jarta ururada Xamaas, Ikhwaanka iyo Iran.
Waxay sidoo kale codsadeen in la xiro saldhiga militari ee Turkiga ku leeyahay Qatar, waxaana usii dheereed inay codsadeen lacag ay ku tilmaameen magdhaw oo ay ku xukumeen in ay Boqortooyada Qatar siiso dalalkaasi isbaheystay oo ku doodaya in khasaaro kasoo gaartay maalgelinta Qatar siiso kooxaha ay ku tilmaameen argagaxisada sida Ikhwaan muslimiinka.
Wasiirada Federaalka ee dowlada Imaaraatiga Ms.Noura al-Kaabi ayaa wareysi ay bixisey Arbacadii lasoo dhaafay ku sheegtay in ay diyaar u yihiin inay gorgortan la galaan Qatar, waxayna si gaar ah uga hadashay arrinta telefishinka Aljazeera.
Xulafada Sacuudiga ayaa horey u sheegay inaysan wax gorgortan ah ka geli doonin 13ka qodob oo ay ku xireen Qatar. Balse Wasiirada imaaraatiga ayaa hada sheegtay in wadahadal diyaar u yihiin.
“….Khasab maaha in telefishinka Aljazeera la xiro gebi ahaan, balse waxaa codsaneynaa in wax laga bedalo qaab uu u shaqeeyo. Si ay u sii shaqeystaan shaqaalaha telefishinkaasi, isla markaana dowlada Qatar ay sii wado maalgelinta telefishinkaasi waa hadii ay wax ka bedasho qaabka ay u dhaqanta warbaahinta Aljazeera…”ayey tiri Wasiirada UAE ee Federaalka Noura al-Kaabi.
Dhinaca kale warbaahinta Aljazeera ayaa sheegtay inaysan ogoleyn in faraha lala soo galo arrimaha maamulida warbaahintaasi madaxa banaan.